ဖော်ထုတ်လိုက်သောမူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ ဦး နှောက်ဆားကစ်များ - orbitofrontal cortex-dorsal striatum (2018) - Your Brain On Porn
ဖော်ထုတ်လိုက်သောမူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ ဦး နှောက်ဆားကစ်များ - orbitofrontal cortex-dorsal striatum (2018)
19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2018
ကြွက်များတွင်တစ်ဦးကလေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူဆက်စပ် compulsive အပြုအမူအခြေခံတဲ့ဦးနှောက်လိုက်လျောညီထွေသတ်မှတ်နှင့်အရာအခြားသူများကိုမကျင့်သော်လည်းတချို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်ပြုမူရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးဦးနှောက် function ကိုအများအပြားအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရှုပ်ထွေး pharmacological သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤအဆိုးကျိုးများတစ်ခုမှာ, အ neurotransmitter dopamine လွှတ်ပေးရန်ကြောင်းအာရုံခံ၏တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် activation, အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးမှဘုံသည်နှင့်ရှည်လျားသောစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အတွက် Writing သဘာဝ, Pascoli et al ။1 အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပေမယ့်တချို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများဆုလာဘ်ရှာအံ့သောငှါအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြအံ့သောငှါ dopamine အာရုံခံ၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ neurobiological ယန္တရားများအပေါ်အစီရင်ခံစာ - လူ့စွဲတစ်ခု defining အင်္ဂါရပ်ကြောင်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအမျိုးအစား2.
အဆိုပါစာရေးဆရာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ရဲ့ dopamine စနစ်များ၏ activation တူတဲ့တစ်ခု optogenetics ချဉ်းကပ်နည်းယူ: သူတို့ဗီဇအင်ဂျင်နီယာကြွက်၏ဦးနှောက်၏ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် dopamine အာရုံခံကိုသက်ဝင်တစ်ခု optical fiber ကိုတစျဆငျ့ကိုအပ်လေဆာအလင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါကြွက်တိုက်ရိုက်လီဗာကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ထိုအအာရုံခံသူတို့ကိုယ်သူတို့လှုံ့ဆော်နှင့်နီးပါး 40 ပတ်2မိနစ်စမ်းသပ်ကာလတစ်ရက်စဉ်အတွင်း avidly ဤ action ဖျော်ဖြေနိုင်။
နောက်ဆက်တွဲရက်ပေါင်းတွင်ကြွက်ကျပန်းမှာ, လီဗာ-နှိပ်အခါသမယ၏သုံးပုံတစ်ပုံအပေါ်သူတို့ခြေတစ်ဦးအကျဉ်းလျှပ်စစ်ရှော့ခ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီအခွအေနေအောက်မှာသူတို့ရဲ့အပြုအမူတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲထင်ရှား: ခြေလျင်လှုပ်ခြင်း (။ ပုံ 40a) ပေးထားသည့်အခါကျန်ရှိနေသေးသော 1% (ဇွဲ) နာကျင်လက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်သော်လည်းကြွက်များ (ချေါရှော) ၏ 60% အလွန်လီဗာ-နှိပ်၏ကြိမ်နှုန်းလျှော့ချ သူတို့ရဲ့ dopamine အာရုံခံ (ပုံ။ 1b)-လှုံ့ဆော်မိမိကိုယ်ကိုဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ပြစ်ဒဏ်။ ဤစာရေးဆရာများအချို့ယခင်ကပြသကြသည့်အတိုင်း3, ထိုဇွဲရှိရှိကြွက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းဇွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်မော်ဒယ်များကိုပေးစွမ်းနှင့်အဘယ်သူ၏မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု compulsive ဖြစ်လာလူ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် Parallel ။
ပုံ 1 | ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine အာရုံခံ၏ compulsive activation ။ Pascoli အားဖြင့်လေ့လာမှုမှာ et al.1, ကြွက်တစ်ဦး optical fiber ကိုတို့ကကောက်ယူလေဆာအလင်း၏ပေးပို့မှတဆင့် dopamine-releasing အာရုံခံကိုသက်ဝင်ဖို့လီဗာကိုဖိလေ၏။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံရာစီမံကိန်းသည် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှဦးနှောက်ထဲမှာ ventral striatum ရန်, ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ a, အခြို့သောကြွက်ကြောင့်သူတို့ခြေတစ်ဦးနာကျင်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်အခါလီဗာ-နှိပ်အပြုအမူလျှော့ချ, ရှောငျချေါ။ အဆိုပါ dorsal striatum မှထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း orbitofrontal cortex (OFC) ၏အာရုံခံအကြားဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အားသည်ဤကြွက်များတွင်အနိမ့်ခဲ့သည်။ bအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူတစ်ခုအမာခံများ - အခြားကြွက်, ဇွဲချေါ, ပြစ်ဒဏ်ကိုသော်လည်းလီဗာကိုနှိပ်မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ OFC နှင့် dorsal striatum အကြားအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုရှောငျထက်ကဤကြွက်များတွင်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြသည်။ စာရေးသူကြွက်ဇွဲရှိရှိတွင်ဤဆက်သွယ်မှုအားနည်းသောအခါ, တိရိစ္ဆာန်များ '' compulsive အပြုအမူ (ပြမပါ) ယုတ်လျော့။
အဆိုပါစာရေးဆရာလာမယ့်ဇွဲနှင့်ရှော၏ဦးနှောက်အကြားကွဲပြားခြားနားသောဘာဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူတို့ကကြွက်တွေဟာလီဗာကိုဖိလာသောအခါတက်ကြွခဲ့ကြရသောကွန်ရက်များဆုံးဖြတ်ရန်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာများချိတ်ဆက်အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex (OFC) တို့အကြားဆက်သွယ်ရေး, ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဧရိယာများနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရေးယူအတွက်စေ့စပ်သော dorsal striatum, dopamine Self-stimulation နှင့်အတူလှုပ်ရရှိရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြွက်တွေမှာလီဗာ-နှိပ်မတိုင်မီတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒီအာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ Optogenetic တားစီးကြွက်အမှုကိုရှောသို့ကြွက်ဇွဲရှိရှိလှည့်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဟာ dorsal striatum ဖို့ OFC ကနေထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံ၏တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှု dopamine အာရုံခံ၏ compulsive activation ၏ဤပုံစံများအတွက်လိုအပ်သောခဲ့ကြောင်းပြသထားတယ်။
သို့သော်ဤအမူအကျင့် switch ကိုသာယာယီခဲ့: optogenetic တားစီးပိတ်ထားခဲ့သည်သောအခါ, compulsive အပြုအမူကြွက်ဇွဲရှိရှိအတွက်ပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အာရုံခံအကြားလမ်းဆုံ - - OFC နှင့် dorsal striatum အာရုံခံချိတ်ဆက် dopamine အာရုံခံ၏ Self-stimulation ၏နေ့ရက်များစွာ၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းနိုင်စာရေးသူဟာ synapses မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲအပြောင်းအလဲများကြောင့်နှီးနှောလေ၏။ ဤပြောင်းလဲမှသာကြွက်ဇွဲရှိရှိအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်ဤသူတို့ရဲ့မြဲ compulsive အပြုအမူကိုရှင်းပြလိမ့်မယ်။
ဒီယူဆချက်မှန်ပါလျှင်, OFC နှင့် dorsal striatum အာရုံခံအကြား Synaptic ဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အား OFC အာရုံခံခြင်းဖြင့် dorsal striatum အာရုံခံ၏ပိုကောင်း activation ဖွင့်, ရှောအတွက်ထက်ဇွဲအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်သင့်သည်။ အမှန်စင်စစ် Pascoli et al ။ OFC အာရုံခံခြင်းနှင့် dorsal striatum အာရုံခံအကြား synapses ၏ခွန်အားကြွက်ဇွဲရှိရှိအတွက် (ပုံ။ 1) တိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့သွားလေ၏။ ရှော, လှုပ်လက်ခံရရှိကြောင်းစမ်းသပ် Set-up နှင့်ကြွက်များနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ဖူးပေမယ့်လီဗာသုံးစွဲဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ကြွက်အတူအားလုံး OFC နှင့် dorsal striatum အာရုံခံအကြားအနိမ့် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုပြသသည်။
ထူးခြားသည်စာရေးဆရာများ compulsive အပြုအမူအသီးသီးကျဆင်းသို့မဟုတ်ဤအာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်နှိမ်နင်းသို့မဟုတ်သွေးဆောင်ခံရနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်ဇွဲရှိရှိအတွက် OFC နှင့် dorsal striatum အကြား Synaptic ဆက်သွယ်မှု၏အားနည်းတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေမထိတ်လန့်၏မကျြနှာကို In-လှုံ့ဆော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတို့ဆန္ဒလျှော့ချ။ ပြောင်းပြန်ရှောကဤ Synaptic ဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဇွဲသို့လှည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ dorsal striatum မှထုတ်လုပ်တဲ့ OFC အာရုံခံ၏ optogenetic တားစီးပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိယာယီမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့မတူဘဲ, Synaptic ခွန်အား၌ဤပြောင်းလဲမှုများသည်ခြောက်ရက်ပတ်လုံးတည်မြဲမှုတစ်ခုအမူအကျင့် switch ကိုသွေးဆောင်။
Pascoli et al ။ ကြွက်ဟာသူတို့ရဲ့ dopamine အာရုံခံသက်ဝင်ဆက်လက်နာကျင်လှုံ့ဆော်မှုပယ်ဖျက်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့် neuroadaptation ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ လူသားတွေအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်စားသုံးမှုဒါအလားတူ neuroadaptation သူတို့ကိုအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေးယူပြီးဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ,, တူညီတဲ့ dopamine-အားဖြည့်ဆားကစ်၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation စေပါတယ်။ ဒီအဆိုပြုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ OFC နှင့် dorsal striatum အာရုံခံအကြားဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အား၌အပြောင်းအလဲများတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေမထိတ်လန့်၏မျက်နှာကိုအတွက်ကိုကင်း, အမ်ဖီတမင်းသို့မဟုတ် opioids ခံယူဖို့လီဗာကိုနှိပ်ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူဖျန်ဖြေခြင်းရှိမရှိ။ ဆုံးဖြတ်ရန်သင့်တယ်
dopamine အာရုံခံ၏ optogenetic ဆွတိကျစွာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် dopamine အာရုံခံ၏ activation တူတဲ့ပါသလား? လျင်မြန်စွာ optogenetic ဆွနှင့်နှေးကွေးစတင်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ဆောင်ချက်ရှည်ကြာချိန်စဉ်အတွင်းအပေါ်နဲ့ off လေဆာ switching အကြားသိသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုစာရေးဆရာများကိုယခင်ကပြသ4 ကြောင်းကင်းစားသုံးမှုနှင့် optogenetic activation လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုစမ်းသပ်ချဉ်းကပ်ဘို့ခိုင်ခံ့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပေး, dopamine အာရုံခံနှင့်၎င်းတို့၏ချက်ချင်းမြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်နီးပါးတူညီအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သွေးဆောင်။
အဘယ်ကြောင့် dopamine အာရုံခံ၏ Self-stimulation တစ်ဦးချင်းစီကသာများအနက်အချို့သာလျှင်အတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသနည်း? ခြေလျင်-shock ပြစ်ဒဏ်မတိုင်မီဇွဲရှိရှိနှင့်အမှုကိုရှောကြွက် Self-နှိုးဆွခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များအလားတူအရေအတွက်သည်နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးသေးအုပ်စုနှစ်စု၏ဦးနှောက်မတူကွဲပြားနည်းလမ်းပြောင်းလဲပြီပုံရသည်။ ကြွက်များအားဖြင့်နှိုးဆွအဆိုပါ VTA dopamine အာရုံခံအဆိုပါ OFC ဒါမှမဟုတ် dorsal striatum တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ဘူး, ဒါကြောင့်ဒီဒေသတွေအကြားက link မျိုးစုံ Synaptic ဆက်သွယ်မှုပါဝင်ရပါမည်။ VTA dopamine အာရုံခံ၏တက်ကြွစွာ dorsal striatum ပြောင်းလဲမှုများစေခြင်းငှါအရာမှတဆင့်တစ်ဦးက multisynaptic လမ်းကြောင်းယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့ပြီး5နှင့် compulsive မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေမှမဟုတ်တဲ့-compulsive ကနေအကူးအပြောင်းအခြေခံမှအဆိုပြုပြီးပါပြီ6,7။ ဒီ multisynaptic ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် pre-ရှိပြီးသားကွဲပြားမှုအဘယ်ကြောင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူကိုရှင်းပြခြင်း, Synaptic ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများကိုသာတချို့ကြွက်တွေမှာပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။
Synaptic ပြောင်းလဲမှုများကိုရက်, နှစ်သို့မဟုတ်ပင်တစ်သက်တာအဘို့ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေ Pascoli အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းငှါ, et al။ မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့အမာခံများကြောင်းတစ်ခုမွဲအပြုအမူပြောင်းလဲမှု၏အခြေခံဖွဲ့စည်း? ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးသော OFC နှင့် dorsal striatum အကြားဆက်သွယ်မှုများအားကောင်းမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်, ထိုသို့အမှန်ပင်ရွေ့လျားမှုအတွက် culmination အာရုံကြောဖြစ်ရပ်များတစ်ကွင်းဆက်သတ်မှတ်ကြောင်း dopamine စနစ်များ၏ activation ကြောင်းတောင်းမည် compulsive မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေ၌။
သဘာဝ 564, 349-350 (2018)